शिक्षा, बेरोजगार र राजनीतिको सम्बन्ध (समसामयिक लेख) | मझेरी डट कम
Buddha Chemjong — Sat, 06/05/2010 - 10:16
"उदेश्य त के लिनु उडी छुनु चन्द्र लोक।" यो अभिव्यक्ति महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हामीलाई सुनाएर अनन्त स्वर्गलोकमा बसिरहेका छन् होला । यो प्रसंग मान्छेको अहिलेको आधुनिक जीवनसँगै मान्छेका इच्छा आकांक्षा असीमित भएर गुन्जिरहेको बेला समय सापेक्ष देखिन्छ। तर हामी मानव जुनीलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने अलि फरक देखिन्छ । हामी यस्तो उदेश्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौं कि हाम्रो भौतिक, मानसिक, शारीरिक स्वरूपलाई विचार नै नगरी आफ्नो निजी स्वार्थलाई मात्र सोचेर अगाडी बढी रहेका त छैनौ? कतै सफलताको नाममा आफैं खाऊ आफैं मात्र लगाऊ भन्ने भावनाले अल्झिएको त छैनौ? हामी आफ्नो राष्ट्रियता अनि देश बिग्रिदै गएको कुरा राजनेताहरूलाई मात्र दोष दिएर उम्किन खोजेको त होइनौ? हामीहरू भन्ने गर्छौ " नेपाली सोझा सिधा जनताहरूलाई नेताहरूले यता-उता कुरा घुमाएर भेडो जस्तो अन्धो बनाएर सधै राज गरिरहेका छन्" यो कुरा अलि सोचनीय बिषय हो " किन जनताहरू भेडो भए?"
अब इतिहासको कुरा आउछ, नेपालमा जब राणा शासन शुरु भयो, रैतीहरूलाई पढ्ने वातावरण भएन । यो भारतमा भएका अंग्रेज जनरलहरूले राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई सिकाएको जग जाहेर छ, जनताहरूलाई शिक्षित गराएमा आफैंलाई घाडो हुन्छ, भन्ने कुरा अंग्रेजहरूले राणाहरूलाई सिकाए । यही कारण नेपालमा यो राणा काल अध्यारो खण्ड हो, त्यस पछि २००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि देशमा केही सुधार हुनलाई अगाडी बढ्ने क्रममा संक्रमण कालका छोटा सरकारले पनि यही कुरालाई सोच्न भ्याएनन् । यही बिचमा राजा महेन्द्रले कु गरी सम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिएपछि अर्को अध्यारो काल खण्ड शुरु भयो । जुन रुपमा देश अगाडी बढ्नु पर्थ्यो, त्यो नगरी राष्ट्रमा शिक्षालाई कुनै महत्व दिइएन । शिक्षाले जनताको आँखा खोले पछि आफ्नो शासन सत्ता कम्जोर हुन्छ भन्ने कुरा राजा महेन्द्रले राम्ररी बुझेका थिए । यो सिस्टम राजा महेन्द्र देखि राजा वीरेन्द्रले पछ्याए, खाली अत्याबसक कुराहरूमा मात्र शिक्षालाई महत्व दिइयो । र शिक्षा बिना कुनै पनि देश बिकाश, निर्माणका कुरा हुन सम्भब हुदैन भन्ने भन्ने कुरा नबुझेका हाम्रा राजाहरू नेपाललाई अझ पनि अध्यारोमा राख्न तल्लिन थिए, ता कि अझ पनि राजालाई बिष्णु अवतार मानि रैतीहरूले पुजा गरिरहुन् ।
यही क्रममा सीमित रुपमा मात्र जनताका आँखा खुलेका थिए, यही सीमित जनताको आँखा खुलेको जमातले २०४६ सालको प्रजातन्त्र ल्याउन पुग्यो । तर यो बेला विश्वको संरचना यस्तो भैसकेको थियो कि यो संसार खुला किताब हुन लागेको थियो । हामी नेपालीहरू पनि बिकसित मुलुकका सामग्री, उन्नति, बिकाशले मन्त्र मुग्ध मात्र भयौ । आफ्नो राष्ट्रलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच तत्कालिन सरकारले सोच्न सकेनन् । एक अर्का राजनीतिक दलहरू सरकारमा पुग्ने र मोज गर्ने प्रवृति मात्र बढ्न थाल्यो । पूर्व सरकारले निर्णय गरेका राम्रा कामको थालनी नगरी रद्द गरि अर्को शुरु गर्ने राजनीतिक दलहरूले रिस साध्ने थलो बनाए । सरकार पक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा मात्र सहि अरुको कुरा काम बेसहि भन्ने खालको नियम नजिर बसाए । राम्रा काममा एक अर्काको सहयोग र सम्मान गर्ने काम भएन । यही कारणले नेपालमा बिकाशका कामहरू सुचारु हुन सकेनन्, न त कुनै कलकारखाना नै खुले, न त कम्पनि, उद्योगहरू नै खुले, न त शिक्षा नै । हामी जनताहरूमा बेरोजगार बढ्दै गयो, बैज्ञानिक तरिकाले खेति गर्ने प्रबिधि पनि ल्याउन सकिएन, यही बेरोजगारी जनतालाई आफ्नो दाहिने हात बनाइ नेताहरूले रजाई गर्न थाले, मतलब आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सोझा बेरोजगार जनतालाई प्रयोग गर्न थाले । अनि हामी कतिपय जनताहरू रोजगारको खोजिमा संसारमा विभिन्न राष्ट्रमा हात, मुख जोर्नको लागि काम गर्न जान बाध्य भएका छौ । अनि अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नै बेरोजगारी हो, यदि मान्छे रोजगार पाएको छ, काममा व्यस्त भएमा राजनीतिक सभा, आमसभामा कम नै देखिन्छ, जुलुसमा इट्टा, ढुंगा बोक्दै हिडदैन । रोजगार भएको मान्छे सडकमा आन्दोलन कमै देखिन्छन, मतलब उनीहरूलाई सडकमा ढुंगा, इट्टा बोक्न त्यति फुर्सद हुदैन । तर रोजगार नभएकालाई अब बेरोजगार भएर घरमा बस्नु भन्दा सडकमा होहल्ला गर्दै हिडनु मजै हुन्छ नै ।
अनि बेरोजगार भएर बसेको मान्छेलाई केही भए पनि काम गरेर बस्नु नि भन्ने अग्रज मान्छेको सल्लाहको सवालमा " १०० जना मध्ये २५ जनाले मात्र काम पाएको अबस्थामा ७५ जनाले के काम पाउने र काम गर्ने?" यही कारण भर्खर उदाउदै गरेका स्कुलका नानीहरू पनि पढ्न ध्यान नदिएर बरु अरब र मलेसियामा गएर पैसा कमाउछु भन्ने मनशायमा देखिन्छन । र अहिलेका राजनीतिक दलहरूले यिनै बेरोजगार जमातलाई समातेर बसेको छ र अहिलेको संक्रमण कालिन अबस्थामा राजा पनि हटाएको अबस्थामा अब आफु पार्टीका राजनेताहरू नै छोटे राजाको रुपमा आफुलाई प्रतिस्थापन गराउन प्रयास गर्दैछन् । होइन भने हाम्रो देशको यस्तो बेहाल भैरहेको छ, बिजुली लोडसेडिंग यस्तो हाहाकार छ, गरिबी यो छ, महगी यस्तो छ, आफ्नो देशमा उत्पादित खानेकुराले एक छेउ पनि हामी नेपालीहरूलाई आफैंलाई पुगिरहेको छैन । सम्पूर्ण कुराहरू किनेर खानु पर्छ, निर्यात छैन खालि आयात मात्र गरे पछि हामी नेपालीको सबै पैसा त विदेश जाने नै भयो ।
के यो कुरा हाम्रा राजनेताहरूले बुझेका छैनन् र? उनीहरूलाई यी कुरा सबै थाहा छ तापनि जनताको नाममा राजनीति गरेर आफु छोटे राजाका रुपमा उदाउन चाहन्छन । त्यहिँ कारणले आफ्नो स्वार्थको खातिर जनता र देशको अवस्था यस्तो हुन पुगेको छ, अझ के कस्तो अवस्था आउने हो, त्यो त समय क्रमले बताउने नै छ । यिनै कुराका बाझबुद् मेरो व्यक्तिगत अनुरोध या प्रश्न छ, सबै शिक्षित बुद्धिजिबी महानुभावहरूलाई, " यहाँ एउटा जड कुरा चाही छ, हामी शिक्षित कहलिने बर्गले पनि आफ्नो ठाउबाट आफ्नो किसिमले जनतालाई शिक्षित गराउन सकिन्छ कि?" सकेको ब्यापार, कलकारखाना, उद्योग खोलेर गरिब जनतालाई रोजगार दिलाउने हो कि?
नेपालमा रहनु भएका या देश बाहिर बस्नु भएका सबै शिक्षित बुद्धिजीवि महानुभावहरू एक पटक खुला हृदयले सोच्नोस है!
आखिर हामी मानिसको जूनी लिएर जन्म लिइसकेपछि आफु साथै आफ्नो समाज देशको लागि पनि केही गर्नु पर्छ भन्ने भावना लिनु भयो भने यो तपाईहरूको जीवन सार्थक भएको ठहरिने छ । हाम्रो देशमा जनताहरू शिक्षित भएर सचेत भएको खण्डमा यी झुटा खेति गरेर राजनीति गर्नेहरू हराएर जाने छन् र नया नेपालको लागि नया नेतृत्वले अबश्य यो देशलाई उज्यालो तर्फ लिएर जाने छ र हामी गर्व साथ भन्न पाउने छौ "गणतन्त्र नेपाल" मेरो देश हो ।
खै ! के भएको हो यो समयलाई
अविरल यात्रा : रोमान्चक द्वन्दहरू
तीन मुक्तक (मान्छे, जीवन, र मन)
दुई मुक्तक (सागरमाथा जस्तो शिर)
आफ्नै देशमा पसिना बगाउनु पर्छ युवा
फूलमालामा सजिने आकाश भैरव
कवितारामका दुई कथासंग्रह एक पर्यावलोकन
फूल देखाई छूरी घस्यौ